Waraysiyo - Yaxye Yeebaash
Safarkii Dooxa Hargeysa
“….Baqda adeer, baqda..”
In Aad Qof Nacdo Ayaa Ka Fudud In Aad Qof Jeclaato
Waxa aan Dhigayaa af-Soomaaliga!
Aano Waa Aafo W/Q Mustafe M. Dhegay
Hadmaad i jeclaanaysaa
yaxye - October 4, 2016 5
Heestan waxa aan ka curiyay ruux dumar ah oo iisheegtay in ay jeceshahay wiil in muddo ahayd. Isagu se uu hadba meermeerin jiray, dabadeed maalintii danbe ay ku tidhi "Waan kugu daalaye, hadmaad i...
yaxye - March 8, 2015 0
Toddobaadba shaybaa caqliga, taallo ugu yaala Toddobaadba qawlbaa u taga, maanka tirinaaya Toddobaadba waayaha tarmaa, tanag kusii saara Toddoobaadba maluhuu tuntaa, taawi kugu ooda Toddobaadba melba ku tigan, tiiha kugu reenta Toddobaadba tigidhbaa u go’an, duun ka tegistaada Toddobaadba temminbuu...
yaxye - May 31, 2020 0
Shalay lixdii subaxnimo ayaanu dhanka Waqooyi uga baxnay magaalada Hargeysa. Lixdii fiidnimo na waxa aanu ka soo galno geesta kale ee Koonureed ee magaalada. Qiyaas 20-30 km ah ayaanu socod ku jarnay aniga iyo...
yaxye - April 20, 2020 1
Ilaahay ha daayee mid ka mid ah macalimiintii caafimaadka wax noo dhigi jiray ayaa maalin waxa uu nagu yidhi: "Dhakhtarka aqoonta lihi wuu baqdaa kolka uu bukaan arko, baqashadaas ayaa taxaddarka keenta. Baqda adeer baqda,...
yaxye - February 10, 2020 4
In aad qof nacdo oo aad xumaan ku xukunto ayaa ka fadud in aad qofkaa jeclaato una riyaaqdo. Qofka aad jeclaatay in aad haysato oo aad daryeeshaa iyadu na waxa ay ka dhib badantahay...
yaxye - December 30, 2019 0
Waxa aan wakhti u helay mihnad aan muddo fakaag iyo firaaqo u naadinayay. 10kii sanno ee aan bahda suugaanta ka tirsanaa waxa kalgacal ii hayn jiray in aan noqdo bare afka Soomaaliga ah. Waxa...
yaxye - December 30, 2019 2
Aano waa aafo! Weligay kama talin doono xumaan, xasarad, iyo dagaal aan dad kuwaayo. Habeen qudha kumaan seexan kala fogaynta dadkayga. Aad baan unnecebahay colaadaha iyo dagaallada. Inkastoo aan da’ahaan yarahay haddana, adduunka oo dhan...
yaxye - October 18, 2019 3
Dhammaysnimo waa is baro Nafyahay I dhaliilaysaa Da’ kuu korodhaa dharaar Dhugmiyo samir kugu ladhoo Waxaad dhaaftaad shalay Ku dheygagaysaa haddeer Macaan shay kuu dhadhamay Dhunkaal iyo shay qadhaadh Hadduu kula yahay dhanaan. Hurdadan dhafarkaa ku baray Dhakhsaha daahaa ku faray Gaajana dhereggaa ku simay, Haddaan...
yaxye - October 18, 2019 0
Carab-Dura Carabeey carabeey Cuddoonow nebigii Rabbi soo calmadaa Cadkiinna ka dhashoo Horto cay ma geydaan, Wax se aan cabudhoon Is cadaadiyo jeer, Tixahaygii culnaa Caawa waan godlayaa, Soomaalaan cabdiyow Ku canaanan jiree, Carabbaan durayaa Oon ku ciil baxayaa Carabeey Carabeey Yuhuud caasi ahayd Muslinkay ku cunaan Caruurtay ku dilaan Falasdiin casarkii Cidla sow...
Si Xora U Feker Xumaan qof ku soo dhashoo Ma jiro xaqiraad geyaa, Xadiisku siduu na yidhi Fidradu dadka waa u xool Hooyada se xanbaartay iyo Aabbaha xafidaa geddiya, Hanuunku na waa xag sare. Farxaddu waa xadantadee Nolosha xaladdeeda doon Xariijin qof kuu dhigiyo Hankaaga...
Tix Shay uu xoogsaday Nin ka shaahiyo mid shaxaatamay Oon ka shiixini Isma sheegtaan Shabbahaaddee Shaqo wa sharaf Shaqlan duunyada Nin u shaaxiday Oo shiddoodaa Shidhka fuuloo Ku shaxaartama. Sharcigaasaa Shaandha miirta ah. Shax adoon dhidid Mar u soo shubin Raaxo shooc iyo Shabbac kaa dheer. Sharaxaadaas Waxa sii shada Oo la shaanbada Ma shahaadaha Dhaxal shaaximan Qunyar...